प्याज संग चिकन कलेजो: को नुस्खा। एक पैन मा प्याज संग चिकन कलेजो
चिकन कलेजो reasonably लाभदायक भिटामिन र खनिज को एक उत्कृष्ट स्रोत मानिन्छ। यसलाई अविश्वसनीय सुगन्धित र नाजुक व्यञ्जन प्राप्त छन्। यो byproduct आधारमा Pies, सूप, सलाद र पनि प्यानकेकहरू र Pies लागि भर्नको बनाउन। तर यो विशेष गरी स्वादिष्ट छ र उत्तेजित गर्दछ प्याज संग नरम चिकन कलेजो। विभिन्न व्याख्याहरु यसको तयारी को नुस्खा हालको प्रकाशन मा प्रस्तुत गरिनेछ।
स्वादिष्ट र स्वस्थ व्यञ्जन को तयारी को लागि ताजा चिकन कलेजो चयन गर्न आवश्यक छ। यो चमकदार हुन र समावेशन आक्रान्त बिना भूरा रङ्ग हुनुपर्छ। Yellowness उत्पादन peremorozhen थियो भन्ने संकेत गर्दछ।
प्याज र खट्टा क्रीम संग नुस्खा चिकन कलेजो व्यस्त Housewives बीच धेरै लोकप्रिय छ। यो एक धेरै धनी पकवान, कुनै पनि अनाज, पास्ता र Mashed आलु संग संयुक्त दिन्छ। यो मासु वा पोर्क समकक्ष भन्दा धेरै कम जायका छ किनभने चिकन livers नै राम्रो छ। उत्तरार्द्ध विपरीत, यो हटाइनु पर्छ भनेर कुनै फिलिम छ। तलना चिकन द्वारा-उत्पादन भन्दा बढी दस मिनेट आवश्यकता छैन। अन्यथा यसलाई सुक्खामा एक जोखिम छ। अचार पकवान, यो अन्त मा मनमोहक छ।
एक पैन मा प्याज संग चिकन कलेजो कोमल र रसदार बाहिर गरिएका गर्न, यो खट्टा क्रीम वा क्रीम थप्न सक्नुहुन्छ। राम्रो खाना पकाउन अघि छोटकरीमा दूध मा भिजेको गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो सरल हेरफेर तीतो स्वाद को छुटकारा प्राप्त हुनेछ।
यो नुस्खा अनुसार, तपाईंलाई छिटो र सजिलै एक स्वादिष्ट र flavorful पकवान बनाउन सक्छ। यो केवल एक अद्भुत विकल्प परिवार खाने छैन, तर पनि अतिथि को unscheduled आगमन मा तपाईं बाहिर मदत। तपाईंले पहिले पनि चिकन livers पकाउन प्याज संग, तपाईं आफ्नो फ्रिज आवश्यक सबै छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस्। यस मामला मा, तपाईंलाई आवश्यक:
कलेजो को छ सय ग्राम।
पीठो तीन चमचा।
सेतो प्याज तीन सय ग्राम।
नुन, मसला र एक सानो वनस्पति तेल प्रयोग गरेर यस्तो व्यञ्जन को तयारी मा थप घटक रूपमा।
त्यहाँ संचित जिगर रगत देखि गायब गर्न, यो सुन्दर पानी मा छोटकरीमा भिगो। पन्ध्र मिनेट पछि, द्वारा-उत्पादन एक, धोए छ तरल अवशेष decanted र ठूलो chunks मा कटौती। भोजन यो विधि कलेजो paneer द्वारा तयार र सूर्यमुखी तेल greased एक हट कराइ मा फैलियो। यो प्रत्येक टुक्रा राम्रो पोलेको छ भनेर पक्का गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
त्यसपछि ब्राउन offal प्याज आधा छल्ले फैलाउन र निरन्तर मनमा राख्दै पैन सामग्रीहरू जगाएर, मध्यम गर्मी मा सबै सँगै खाना पकाउन। बस नुन गर्न थाली पकवान, मसला संग अनुभवी र टोपी ढाकिएको बाट हट्न अघि। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, बस चिकन कलेजो तयार। व्यञ्जनहरु, यो पनि विशेष सामाग्री आवश्यकता छैन र कार्यान्वयन गर्न सजिलो हो (प्याज संग तला, यो छ, खैर, विशेष गरी राम्रो छ)।
सोया सस संग विकल्प
यो अविश्वसनीय रसदार बनाउन र कोमल पकवान महंगा र अभाव खाना आवश्यकता छैन। र प्रविधि धेरै सरल छ, त्यसैले यसलाई सजिलै महारत पनि अनुभवहीन पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री छ। आफ्नो परिवार एक स्वादिष्ट खाने खुवाउन, त्यहाँ आफ्नो औँलामा तपाईं आवश्यक सबै छ कि छैन भनेर अग्रिम जाँच गर्नुहोस्। तपाईंलाई आवश्यक:
आधा किलो कुखुराको कलेजो।
तरल मह जोडी चमचा।
सोया सस को चार चमचा।
प्याज नुस्खा संग शाकाहारी चिकन कलेजो गर्न ताजा र स्वाद नभएको, अतिरिक्त वनस्पति तेल, नुन र मसला प्राप्त छैन, आफ्नो Cookbook मा हुन निश्चित छ।
प्रक्रिया को विवरण
जिगर bile obsushivayut अवशेष र कागज तौलिये द्वारा पखालिए। यो विधि द्वारा तयार byproduct एकदम ठूलो टुक्रा कटौती र छेउमा गर्न हटाउनुहोस्।
वनस्पति तेल संग greased एक हट कराइ मा, कटा प्याज फैलाउन र हल्कासित यो तलना। केही मिनेट पछि कलेजो पठाउन र समय देखि भूल छैन समय जगाएर, मध्यम गर्मी मा तयार छोड्न। byproduct अलिकति एक पैन मा browned गर्दा सोया सस र तरल मह पोखे। सबै नुन र मसला संग अनुभवी र न्यूनतम आगो लागि खडा छाडियो। चिकन एक पैन मा प्याज संग दस मिनेट पछि कलेजो, प्रयोगको लागि पूर्ण तयार छ। चामल वा Mashed आलु संग सेवा गर्छन्।
रक्सी संग विकल्प
तल वर्णन प्रविधि अनुसार बाहिर छ कि छैन पाहुनाहरूको आगमन गर्न पेश गर्न लाज धेरै स्वादिष्ट र flavorful पकवान गर्दछ। यो एकदम चाँडै यसलाई तयार छ, तर हराइरहेको घटक को लागि खोज को प्रक्रिया ढिलाइ गर्न, सबै आवश्यक प्रावधान बनाउन। तपाईंको फ्रिज यो समयमा हुनुपर्छ:
चिकन कलेजो को छ सय ग्राम।
सेतो रक्सी को एक सय र सत्तरी-पाँच milliliters।
मक्खन को चालीस ग्राम।
पीठो जोडी चमचा।
चिकन कलेजो (व्यञ्जनहरु) तला shallots प्याज संग माथि सूचीमा थप कोमल र flavorful हो, बन्द गर्न तपाईं नुन, मसला र वनस्पति तेल थप्न आवश्यक छ।
सबै को पहिलो, तपाईं कलेजो तयार गर्न सुरु हुनुपर्छ। यसलाई छोटकरीमा चिसो पानी, धो, हटाउन एक कचौरा मा भिगो र धेरै सानो छैन टुक्रा मा कटौती। त्यसपछि पीठो मा लुढका र क्रीम र वनस्पति तेल को एक मिश्रण संग greased को कराइ पठाइएको byproduct।
प्रत्येक पक्षमा दुई मिनेट लागि कलेजो तला, र केवल त्यसपछि केही नुन थप्न र मसलाहरु संग अनुभवी। यो त एउटा छुट्टै प्लेट गर्न पारी छ, र एक पैन कटा shallots मा राखिनेछ। , जलेको बच्न निरन्तर जगाएर न्यूनतम गर्मी मा यो तयार। दस मिनेट पछि रक्सी खन्याइन् र यसलाई उसिनेर। जब यो आधा द्वारा मात्रा मा कम छ, एक कराइ मा मक्खन को बीस ग्राम थप्न र तुरुन्तै गर्मी हटाउन। परिणामस्वरूप सस को तला कलेजो खन्याउन र तालिका सेवा गरे।
मशरूम संग विकल्प
प्याज र गाजर संग चिकन कलेजो एक पैन मा तला किनभने गरिने छैन, र ओवन मा पाक्नु यो नुस्खा रोचक छ। तपाईं यस स्वास्थ्यकर र स्वादिष्ट व्यञ्जन पसलमा जाने र सबै आवश्यक उत्पादन खरिद गर्न पक्का सुरु अघि। यस मामला मा, तपाईं हुन हात मा छ:
ताजा मशरूम दुई सय ग्राम।
जोडी प्याज बल्ब।
खट्टा क्रीम दुई सय ग्राम।
कच्चा अन्डा को एक जोडी।
क्रममा बाहिर आजको लेखमा वर्णन गरिएको छ जो एक नुस्खा प्याज संग स्वादिष्ट र flavorful हो चिकन कलेजो गरिएका छन् गर्न, तपाईं नुन, मसला र तरकारी तेल माथिको सूची विविधता गर्न आवश्यक छ। उत्तरार्द्ध सामाग्री frying लागि आवश्यक छ। र नुन र मसला समाप्त पकवान एक स्वादिष्ट स्वाद दिन।
प्याज र खट्टा क्रीम मशरूम संग नुस्खा चिकन कलेजो presupposes भएकोले पहिलो तपाईं के गर्न आवश्यक छ मशरूम छ। आफ्नो धुने, प्लेट कटौती र तातो वनस्पति तेल मा तला छन्, समय समयमा भड्काए बिर्सेर छैन। छुट्टै कचौरा आफ्नो पारी को एक घण्टा को एक चौथाई, र स्वतन्त्र पैन को कसा भयो गाजर र प्याज कटा पठाउनुहोस्।
दस मिनेट पछि तरकारी दुर्दम्य आकार जसको तल lubricated वनस्पति तेल, शीर्ष पूर्व-तला मशरूम र कलेजो मा राखिएको मा बदलाव passaged। यो सबै खट्टा क्रीम, अन्डा, नुन र मसला को एक मिश्रण भरिएको छ, र त्यसपछि कटा जडीबुटी संग छिडकना र यो ओवन मा पठाउनुहोस्। एक सय र असी डिग्री मा प्याज र गाजर संग पाकेका चिकन कलेजो। लगभग आधा घण्टा पछि पकवान ओवन हटाइएको छ, अलिकति, अंश कटौती र सेवा cooled।
टमाटर संग विकल्प
यो अपेक्षाकृत चाँडै यस प्रविधी मा स्वादिष्ट र सन्तोषजनक पकवान तयार हुन सक्छ। यो राम्रो तरिकाले लगभग कुनै पनि garnish संग जान्छ किनभने यो राम्रो छ। त्यसैले तपाईं, प्याज संग एक साँच्चै flavorful हो र पौष्टिक चिकन कलेजो, अधिकतम सादगी प्रदान गर्दछ जो एक नुस्खा प्राप्त तपाईं भान्सा आवश्यक सबै फेला गरेको अग्रिम निश्चित गर्नुहोस्। यस समयमा, तपाईंलाई आवश्यक:
चिकन livers एक पाउन्ड।
एक गाजर र प्याज।
वनस्पति तेल को साठी milliliters।
टमाटर पेस्ट को चमचा एक जोडी।
पानी, नुन र मसला।
पूर्व-धोए र obsushennuyu कलेजो ठूलो chunks मा कटौती र गरम वनस्पति तेल संग greased एक कराइ मा फैलाउन छ। त्यसपछि तुरुन्तै, एक पोत ढाकिएको एक ढक्कन संग, र यसका सामग्रीहरू एक चौथाई घण्टा न्यूनतम गर्मी मा निभाउन छन्।
एक कराइ यो समय grated गाजर र कटा प्याज आधा छल्ले थप्न र खाना पकाउन जारी गरेपछि केही जल छ भनेर कहिले काँही हलचल गर्न नबिर्स। दस मिनेट पछि टमाटर को पेस्ट, नुन र मसला पठाउन। यो सबै फिल्टर पानी आधा ग्लास खन्याइन् र न्यूनतम आगो को लागि छोड्ने छ। थप दस मिनेट पछि प्याज र गाजर प्रयोगको लागि पूर्ण तयार संग Stewed चिकन कलेजो। नियम, यो पास्ता, तरकारी वा Mashed आलु संग सेवा छ।
ओवन मा ब्रोकोली: grilling लागि सस को विकल्प
स्याउ संग चार्लोट पाइ। पकाउने विकल्पहरू
चिकन खुट्टा breaded कसरी खाना पकाउनु
Tinned माछा संग एक सलाद कसरी तयार
घरमा माछा क्यान्ड? केही असम्भव छ!
शीर्षकहरू कक्षाकोठामा 1 अभिभावक सभाहरूमा: महत्त्वपूर्ण छ के ध्यान
"Totleben" (फोर्ट): इतिहास, फोटो, स्थान
विकास के खेलौना भन्न सकिन्छ?
जहाँ साराटोभ जाने र शहर हेर्न र पट्टाइ लाग्ला छैन?